विचार/ब्लग Archives - Page2of3- Hamrokhotang
Home विचार/ब्लग Page 2
khotang first online news: artical and interview
खोटाङ क्षेत्र न. २ मा १० लाख माथिको ३१ करोड ७५ लाख बजेट
संसारमा मानिस खुशीको खोजीमा भौतारिइरहेको हुन्छ । खुशीकै खोजीमा राष्ट्र वा नागरिकलाई धनी बनाउने प्रयासहरू भैरहेका हुन्छन् । खुशीका विभिन्न मापदण्ड तोकेर राष्ट्रसंघले ‘वर्ल्ड ह्यापी रिपोर्ट’ पनि सार्वजनिक गर्दछ । नेपालको तथ्यांक विभागले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालीको खुशी सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सर्वेक्षण गर्दैछ । आर्थिक वृद्धिदरका कारण...
सङ्घीयतामाथि मन्द बिष ! -(लेख)
– धनचन्द्र राई राज्यको बृहत्तर रुप नै सङ्घीय संरचना हो । एउटा देशभित्रको स्वेच्छिक र ऐच्छिक स्वतन्त्रताको बलियो कम्बिनेसन हो सङ्घीय ब्यबस्था । संसारमा राज्य निर्माणको इतिहास हेर्ने हो भने मान्छेको समुह बिकास सँगसँगै सामुहिक ब्यवस्थापनको कुरा आउँछ । त्यस्तै बिभिन्न बैचारिक समुह, भौगोलिक समुहका ब्यबस्थापनबाट संघिय ब्यबस्थाको...
जनयुद्दका जीवित कथा : ‘रगत र आँशुबाट गणतन्त्र जन्मियो !’: देवान चाम्लिङ(पृथ्वी)को कथा
–लडाईंका कथा भूमिगत मूलधारबाट राजनीतिक लय समाउनुभएका खोटाङ चिप्रिङका देवान चाम्लिङ(पृथ्वी)सँग लडाईंका थुप्रै अनुभव र भोगाईहरु छन् । खोटेहाङ गाउँपालिका–५ का चाम्लिङसँग १० बर्षे शसस्त्र जनयुद्द ताकाका लडाईं तथा हार–जीतभित्र समेटिएका ज्युँदो कथाहरु रहेका छन् । हाल नेकपा खोटाङका अध्यक्ष रहनुभएका चाम्लिङ जनयुद्दका घटनाहरु सुनाउन उति चाख मान्नुहुन्न–‘अहिले युद्दका कुरा गर्दा...
नियात्रा ! “शंघाई देखि हुनान सम्म ।”
- भिम राई, बुइपा खोटाङ, हाल वेलायत कोठा चौप्पटै अँध्यारो थियो । म निन्द्रा बाट अचानक ब्युझे । भित्ते घडि आफ्नै गतिमा दगुरि रहेको थियो । घडि बाट निस्केको टक टक आवाज आफ्नै कानमा गुन्जि रहेको जस्तो आभास हुन्थ्यो । बत्ति बालेर भित्ता तिर फेरि एक सर्को नजर डुलाए...
प्रेमिला राई समय निकै घर्ड्किदो छ । समयको गति पछ्याउन सक्नुलाई सफलता मानिन्छ । समयलाई रोकन सकिन्न । तर समय संगै हातेमालो गरेर जान भने सकिन्छ र त्यहीँ संकल्प गर्न जरुरी छ । मान्छे आफैमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी । चेतना र विचार अर्थात चिन्तनले सर्वश्रेष्ठ तुल्याएको हो । अन्यथा सबै प्रकृया...
धनप्रसाद सुवेदी ‘श्रमिक’ संस्मरण खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल । दिक्तेलको उत्तरपूर्वी सिमानामा अवस्थित रमाइलो गाउँ नेर्पा । नेर्पा गाविसको पश्चिमतर्फ दिक्तेल गाविससँग सीमा जोडिएको वडा नं ९ को मोहारिया टोल र त्यसको बिचतिर पर्ने आकर्षक घुमाउनेडाँडो । घुमाउनेडाँडामुनि दिक्तेलबाट नेर्पा आउने पुरानो मूलबाटो र त्यही मूलबाटो मुनि पारि सोल्मातिरबाट हेर्दा प्रस्ट...
माघ–१४ , आफ्नो मात्र नभई परिवारकै सहाराको रुपमा रहेको दुवै हात र एउटा खुट्टा आँखै अगाडी पोको पारेर फालेको देख्दा हरिकाजीलाई मृत्यू नै प्यारो लागेको थियो । तर मृत्यू पनि आफुले भन्न साथै कहाँ आफ्नो पक्षमा हुन्छ र ! पाँच वर्ष अघिसम्मको त्यो हट्टाकट्टा ज्यान, त्यो फुर्तिलोपना, त्यो जोश र...
‘अरुको विरोध गर्दैमा तिम्रो योग्यता बढ्दैन’
राजकुमार बस्नेत अध्यक्ष, नेविसंघ, खोटाङ अरुको बारेमा अफवाह फैलाई अनावश्यक बिरोध गर्दैमा तिम्रो योग्यता बढ्दैन साथी, बरु उल्टै तिम्रो योग्यताको धार भुत्ते हुँदै जान्छ । बुझ- त्याग त्यस्तो बानी, सच्याउ आँफुलाई । तिम्रो भलाई त्यसैमा जोडिएको छ । अन्यथा तिमी दयाको पात्र मात्र हुनेछौ, त्यो बेलामा तिमिलाई बिचरा मात्र भन्न सकिन्छ...